KORJOOGAHA KING KORINTIISA R-COM KORONTO: DIB-U-EEGIS, QEEXIDA ASTAAMAHA IYO TILMAAMAHA ISTICMAALKA - KUFSI
Faahfaahinta kulubka tooska ah ee ukunta R-Com King Suro20
Markaad haysanayso beer weyn ama si fudud marxaladda koritaanka ee digaagga, waa wax aan loo baahnayn in lagu kalsoonaado digaagga cidla ah ee buulkaba, maaddaama boqolkiiba xayawaanku aanay sare u kicin kiiskan.
Si loo xaliyo dhibaatadan qalab gaar ah oo gaar ah ayaa kaa caawin kara, kaas oo mudada wareegyada oo idil ay sii wadi doonto xaaladaha ugu wanaagsan ee horumarinta chicks.
Intaa waxaa dheer, inkasta oo dhammaan noocyada dhirta ay suurtogal u tahay in ay helaan ugu yaraan 20 oo lakab ah oo loogu talagalay hal geerida ukunta. Qodobkani, waxaanu bixinaynaa feejignaanta R-Com King Suro20, kaas oo horeyba u suurogeliyay in uu abuuro dhinaca wanaagsan oo badanaa waxaa isticmaala beeraleyda digaaga ee gudaha.
King Suro20 - Kulanka Kuuriyada Kuuriya ayaa loogu talagalay digaagga digaagga, shimbiraha, berriga, xajmiga, qufac iyo qoryaha. Dhamaan xaaladaha isticmaalka, boqolkiiba wax soo saarka waxay noqon kartaa 100%.
Ma taqaanaa? Isku-xidhnaanta koowaad ee ugu horreeya waxaa loo adeegsaday in ka badan 3,000 oo sano ka hor. Si aad u kuleysato ukunta, Masriyiintu waxay gubeen caws iyo koontarooley heerkulka "isha". USSR, qalabka wax soo saarka badanaa wuxuu bilaabmay 1928, sannad kastana beeralayda gudaha waxay heleen moodooyin cusub oo la hagaajiyay.
Qalabkani wuxuu ka duwan yahay kuwa kale ee qaabka asalka ah ee tayada iyo tayada sare ee wax soo saarinteeda: qoob-ka-naqshadeeye ayaa loogu talagalay in lagu xisaabiyo saamiga loo baahan yahay iyo ilaalinta xarunta cufnaanta, markaa ma aad ka welweli kartid tirada ukumaha ku dhex jira gudaha (qalabku wuxuu kiis kasta xajinayaa xasilloonida). Waxyaabaha ugu muhiimsani maaha inay ka baxaan King Suro20 qorraxda tooska ah, meelahaas oo leh heerarka sare ee qoyaanka ama qaboojinta.
Fiiri faahfaahinta farsamooyinka kuleyliyaha guriga sida "Egger 264", "Kvochka", "Nest 200", "Sovatutto 24", "Ryabushka 70", "Ryabushka 130", "TGB 280", "Universal 45", "Stimulus -4000 "," IFH 500 "," IFH 1000 "," Stimulus IP-16 "," Remil 550TsD "," Covatutto 108 "," Layer "," Titan "," Stimulus-1000 "," Blitz "," Cinderella, Janoel 24, Neptune iyo AI-48.
Sida sifooyinka dheeraadka ah ee kulankan, waa inay ku jiraan daaqad waawayn si loo kormeero habka wareegidda, nidaamka wareegga ukunta ee tooska ah, madaxbannaanida buuxda ee ilaalinta heerkulka iyo qoyaanka gudaha qalabka, iyo jir xooggan oo ka dhigaya doorashadan xitaa u habboon isticmaalka guriga. isticmaalka.
Tixgeli dhamaan sifooyinka iyo farsamooyinka si faahfaahsan.
Si aad u hesho dulmar guud ee R-Com King Isku-xiraha, waa in aad barato astaamaha farsamada. loo qoondeeyey iyada oo lagu saleynayo shuruudaha qaarkood:
Nooca Qalabka - Kuleylaha Qalabka Qoyska;
Heerarka guud (HxWxD) -26.2x43.2x23.1 cm;
miisaanka - qiyaastii 4 kg;
Waxyaabaha wax soo saarka - boodh aad u adkaysato;
cuntada - laga bilaabo shabakad 220 V;
isticmaalka tamarta - 25-45 W;
heerkulka gudaha kudheeraha, ilaalinta qoyaanka iyo ukunta dhirta - qaabka tooska ah;
nooca wareegga - qunsulka;
saxnaanta heer-kulka - 0.1 ° C;
dalka wax soo saarka - Koonfurta Kuuriya.
Video: Dib u Eegista R-Com King Suro20 Alaab-qeybiyaal badan ayaa bixiya 1 ama 2 sano oo ah damaanad-qaadistan, hase yeeshee, waxay ku doodaan jawaab celinta isticmaalaha, ma jiraan wax cabashooyin ah oo ku saabsan shaqadooda xitaa muddo dheer.
Marka lagu daro sifooyinka farsamooyinka aasaasiga ah ee soo saaraha, tilmaamayaasha wax soo saarka marka la eego taranka noocyada kala duwan ee shimbiraha ayaa noqon doona wax macluumaad ah.
Ma taqaanaa? Sida laga soo xigtay mid ka mid ah noocyada, qaabka qaacidada loo qoondeeyey magaceeda waxaa lagu sharraxay King Suro, oo xukuntay Kymgvan Kai ee gobolka Kuuraaniyadii hore ee 42 AD.
In kasta oo xaqiiqda ah in qalabku leeyahay hal saxaarad oo kaliya oo loo dhigo ukumaha, waa mid caalami ah oo si siman u wanaagsan oo loo dhigo labadaba digaaga iyo digaaga, digaaga iyo ukumaha digaaga, iyo sidoo kale ukunta noocyada kale ee digaaga. Farqiga ayaa noqon doona oo kaliya lambarkooda:
ukunta celceliska digaagga - 24 gogo ';
boodhadh - 60 gogo ';
duck - 20 gogo ';
Goose - celcelis ahaan 9-12 gogo '(iyadoo ku xiran cabbirka ukunta);
digiraha ukunta - 40 gogo ';
ukunta cufan - 46 gogo '.
Waa muhiim! Si loogu sahlanaado in ukumo lagu dhejiyo sariirta, isweydaarisyada gaarka ah waxaa lagu daraa baako bixinta dhalada, waxay ka samaysan yahiin jilicsan oo aad u jilicsan, taas oo u ogolaanaya in ukumo qadar kala duwan lagu dhex geliyo.
R-Com King Suro20 waa nooc khaas ah oo isweydaaris ah, sababtoo ah, marka lagu daro xogta dibadda, qalabkani wuxuu kaloo leeyahay hawlo aan loo baahnayn oo sameeya geeddi-socodka ukunta ukunta oo aad u fudud oo la fahmi karo xitaa bilawga bilowga ah. Astaamaha ugu muhiimsan ee ka mid ah:
Awoodda si toos ah u rakibidda iyo ilaalinta heerkulka iyo qoyaanka si waafaqsan xaaladaha dibadda (sirta farsamooyinka ah ee dashboardka iyo dareeraha iswiidhishka ee saxsanaanta kordhay ayaa masuul ka ah tan);
habka taranka tooska ah;
Qaybta qoyan ee leh mashiinka tamarta;
qoyaan toos ah oo dhowr daqiiqo ah adigoo riixaya "+" badhanka 10 ilbidhiqsi;
suurtogalnimada isticmaalka kabaalka isku-hagaajinta si loogu qiyaaso hawada soo socota;
helitaanka tiknoolojiyadda RCOM, taasoo xaqiijinaysa xitaa qaybinta socodka hawada iyada oo aan si toos ah ukumeynin ukumaha;
Doorashada heerkulka kulka ee u dhaxeeya Kelvin iyo Celsius;
joogitaanka qalabka digniinta heerkulka heerkulka marka ay ka soo baxaan qiimaha la cayimay;
badbaadinta dhammaan goobaha xusuusta kulubka iyo macluumaadka ku saabsan koronto la'aanta.
Dhamaan howlaha qalabka ayaa suurtogal u ah suurtogalnimada naqshadeynta naqshadeeda. Sidaa awgeed, isu-ururinta cufan ee cufan ayaa ciribta suurtagalnimada kicinta kondensate, kuwa qabatimay kuleyliyaha xakameynaya xakamaynta, iyo jiritaanka nacaanka biyaha ayaa kuu ogolaanaya inaad ku darto biyaha oo leh ugu sareyso.
Waxaa laga yaabaa inaad xiiseyneyso inaad akhrido sida loo doorto kulubka saxda ah ee guriga.
Si aad u qaadato hawo cusub gudaha kululeynta iyo yaraanta kulaylka, 4 godadka hawadu waa isku xiran tahay, waxaana suurtagal ah in la yareeyo baqshadda ku jirta bamka automatic ah, taas oo kordhinaysa nolosheeda adeegga, iyada oo loo mahadinayo rukummo gaar ah (waxaa sidoo kale jira 4 ka mid ah).
Qeybta hoose ee treyga ukunta wuxuu leeyahay dhejis ololeed, sidaa daraadeed lugaha shimbiraha digaagsan kuma dul dhajin doono dusha sare, iyo chicks ma dhaawacmayaan.
Faa'iidooyinka qaar ka mid ah tusaalaha lagu sharxay ayaa la siiyaa kore, laakiin kuwan ma aha dhammaan faa'iidooyinka King Suro20 - liiska faa'iidooyinka waa la ballaarin karaa, oo ay ku jiraan kuwa soo socda:
Kulanka degdegga ah iyo kala-soocidda kiiska (hannaankani waa mid qiimo leh marka la nadiifinayo iyo jeermi-qashinka);
qalabka korontada laga saari karo, taas, haddii loo baahdo, waa mid aad u fudud in la nadiifiyo;
joogitaanka dhammaan saddexda badhkeed ee daboolka, taas oo si fudud u fududaynaysa aaladda kontoroolka;
Dhaqdhaqaaqa wanaagsan ee dhismaha, kaas oo u oggolaanaya inuu ilaaliyo dhammaan tilmaamayaasha la qeexay ee microclimate;
Isticmaalida abuurida qalab caag ah oo caadi ah oo nadiif ah, kaas oo, isku darka, sidoo kale leh hanti farsamo.
Si kastaba ha ahaatee, isagoo ka hadlayay mudnaanta tusaalaha, waa wax aan macquul aheyn in la sheego cilladaha of King Suro20.
Inta badan waxay ku jiraan waxyaalahan soo socda:
tuubada ka buuxsantay biyo waxay taaban kartaa kuleylka kuleylka daboolka iyo dhalaalida, sidaas darteed mar kasta oo aad xirto qalabka waa inaad si dhow u daawataa;
Iyadoo ay sabab u tahay howlgallada qunyar-socodka ah ee mashiinka, kumbiyuutarka ayaa sidoo kale si tartiib ah u soo ururiya tilmaamaha qoyaanka ee loo baahan yahay, markaa ka hor intaadan xirin tuubada, waxaad horay u buuxin kartaa biyo;
Mararka qaarkood waxaa jiri kara dhibaatooyin habka wareegga inta lagu jiro mudada ukumaha goosashada, maaddaama ay ka miisaamayaan digaag badan (xaaladahaas oo kale waa inaad adigu si sax ah u saxdaa);
Biyaha oo keliya ayaa ku habboon shaqada qumman ee joogtada ah, maqnaanshaha koronto la'aantu waxay sidoo kale muhiim u tahay - kor u qaadida awoodda taasoo keenta in qalabka kulaylka degdega ah ee qalabka, taas oo saameeysa horumarka chicks.
Waa inaadan isku dayin inaad xirto qalabka haddii aadan fahmin dhammaan waxyaabaha ka soo horjeeda hawlgalka. Xadgudubka ugu yar ee shuruudaha loogu talagalay isku-xirka ama isku-xirnaanta, hawlgalkeeda khaldan ayaa suurtagal ah, taas oo keeni karta burbur ama waxyeello ugxanta loo dhigay.
Ka hor intaanad u sii wadin ururinta qalabka, ogow goobta gaar ah ee meelaynta. Qolka la doorto, heerkulka waa in lagu hayaa + 20 ... +25 ° S, heerkulka dhawaaqa iyo qalqalaha waa inuu gaaraa xadka ugu hooseeya ee suurtogalka ah.
Waxaan ku talinaynaa in aan akhrino sida loo nadiifiyo qaaxada ka hor inta aan la dhigin ukumaha, sida loo nuugo loona dhaqo ukunta ka hor inta aan la kulmin, sida loo dhigo ukumaha ku jira maskaxda.
Iftiimintu waxay noqon kartaa mid caadi ah ama wax yar ka sareysa, laakiin waxa ugu muhiimsan waa in raajooyinka tooska ah ee qorraxda aysan ku dhicin qalabka. Sida tooska ah ula shaqeynayo masraxa, Dhammaan tallaabooyinka udub-dhexaadka ah iyo isku-hagaajinta ayaa la yareeyay dhowr marxaladood oo isbarbar socda:
Si aad u bilawdo, sanduuqa furaha ku furo oo hubi joogitaanka dhammaan walxaha lagu darayo xirmada (uma baahnid inaad tuurto sanduuqa: waxay ku habboon tahay kaydinta dheeraadka ah ee qalabka).
Markaad qaadato maskaxda, fur furka labada xarkood ee ku xir xirka kumbuyuutarka ee daaqada daawada, iyo, dib u noqosho 4 bareelo badan, iska tuur.
Si fiican u hagaaji tuubada silikoonta godka loogu talagalay oo hubi in aan la xoqin.
Ibta ka soo tuubada daaqada muuqaalka waa in lagu geliyaa godka qaybta kontoroolka, ka dibna ku xir qaybta daaqada muuqaalka ah iyo inaad ku ilaaliso laba xadhig (laakiin adigu ha u adkeynin).
Hadda jarjar gogol ah ku haboon (heerkulka uumiga wuxuu ku xirnaan doonaa cabbirka: 50-55 mm - 50%, 70-75 mm - 60%) kuna hagaaji daaqada daawashada iyadoo la isticmaalayo laba rikoodh.
Waa muhiim! Kala soocida bukaanka (oo si gooni gooni loo iibin karo) waa in la beddelo ugu yaraan lixdii biloodba mar, laakiin waqtiyo cayiman oo dheeraad ah waxay ku xiran tahay tayada biyaha la isticmaalo (sida kor ku xusan, waa lagama maarmaan in la damiyo).
Ku xir kiiska qalabka, baalalka iyo daboolka. Hadda waxay ku sii jiraysaa oo kaliya in ay ukumo ku dhejiso.
Habka loo dhigo ukumaha waxaa lagu magacaabi karaa hawlaha ugu fudud marka la shaqeynayo Shirkada King Suro20, sababtoo ah dhammaan waxyaabaha lagaa rabo waa inaad u sameysaan una kala qaybi qaybaha khaaska ah ee ku jira xirmada. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira waxoogaa xiiso leh.
Waxaan kugula talineynaa inaad akhrido sida habboon si aad u kululaato digaag, duck, turkey, goose, digaagduur, ukunta indoutin.
Tusaale ahaan, ukumaha waa in la gooyaa oo kaliya dhamaadka fiiqan, oo aan cadaadis badan saarin deriska (u dhow ukunta weyn waa fiican tahay in la dhigo mid yar si aanay u taaban intii lagu jiray geedi-socodka).
Sida ugu dhakhsaha badan oo dhan xiniinyaha meelahooda u dhigaan, waxaad xiri kartaa daboolka (dariishadda guud) oo bilaw inaad soo qaadatid qunsulka iyo bamka.
Video: saarista ukumo ku jira kobcin Si tan loo sameeyo, raac talaabooyinkan:
Geli tubaakooyinka aluminiumka ah si aad uhesho si ay ugu habboonaadaan.
Ku rid qaybta muraayadda ee dusha sare si adagna u adkee qalabka wax lagu rakibo. Qeybta labaad waxay u egtahay kan ugu horreeya. Masruufka waa in uu sameeyaa si tartiib tartiib ah oo ukumaha ah, qiyaastii 90 darajo saacad kasta, laakiin xitaa haddii aad u maleyneyso in aysan mar walba u hoggaansamin arintan, isticmaalka buufinta WD-40 ee habka kala wareejinta iyo qaybta shaqada ayaa gacan ka geysan doonta inay jilciso shaqada.
Hadda, si aad u soo qaadatid bamka, jarjar tuubada 35 mm siliconka ah oo geli ibta naaska, sida lagu muujiyey Jaantus 1-2 (badanaa ficilkan waxaa lagu sameeyaa marka la iibsado).
Tuuji dhuunta 1.5 mitir laba qaybood isla markaana gali ibta naaska ah (Jaantus 1-3). Haddii tuubbooyinka aysan soo galin dhammaadka, markaa maahan inaad ku tiirsato bamka fiican.
Iska ilaali labada xarkood ee kore ee kiiska (Jaantuska 1-0) oo geli tubada kulligeed iyo muraayada godka (jaantuska 1-5). Qabo qaybta "c" si aad ugu dhufato "d" keligiis (xidhiidhku waa inuu ahaadaa mid aad u adag), ka dibna toosi tuubooyinka gudaha iyo balaastiga (oo lagu calaamadeeyay "IN" iyo "OUT") oo xiro kiiska. Dabcan, dhammaan tuubooyinka iyo fiilooyinka waa in ay si xor ah u dhaafaan, iyada oo aan xoqin.
Ku xiridda masruufka iyo bamka muraayadda, waxay weli ku jirtaa oo kaliya inay ku jirto shabakada korontada, waxaad bilaabi kartaa inaad shaqeyso. Laga bilaabo bilawga koowaad, qalabku wuxuu la shaqayn doonaa goobaha warshadaha, taas oo ah, si loo ilaaliyo heerkulka +37.5 ° C, iyo qoyaan - qiyaastii 45%.
Haddii qiimahaasi aysan kugu habooneyn (waxay ku kala duwanaan karaan hadba nooca shimbirta la doortay), markaa waxaad u baahan tahay inaad bedesho gacantaada adigoo isticmaalaya badhannada hoos ka muuqata. Marka korontadu ay ku xiran tahay, bandhigyadu way madoobaan doonaa makiinadda ayaa bilaabi doonta dhowr ilbiriqsi.
Waa muhiim! Marka ugu horaysa, waxaa jiri kara ur aan fiicnayn, taas oo ah mid caadi ah.
Isla mar ahaantaana, version nuqulku wuxuu ka muuqan doonaa shaashadda, ka dibna waxaa lagu dhawaaqi doonaa maqal 15 saacadood. Isla mar ahaantaana, waxaad arki doontaa heerkulka hadda iyo qoyaanka lagu soo bandhigay shaashadda, kaas oo xoqaya. Haddii wakhti ka dib, sabab qaar ka mid ah, korontada qalabka korontada ayaa jaban, ka dib markii dib loo furo tilmaamihii hore ayaa iftiimin doona. Ka dib markii ugu horeysey firfircooni, qalabku wuxuu gaari doonaa goobaha warshadaha illaa saacad bilowga, sababtoo ah sirdoon farsameedku wuxuu u baahan yahay waqti si loo ogaado qiimaha ugu fiicnaanta deegaanka.
Waxaa habboon in la fiiriyo waxyaabo kale oo muhiim ah marka la shaqeynayo R-Com King Suro20:
haddii ay lagama maarmaan tahay in la joojiyo ukumaha ukumaha 3 maalmood ka hor guurka, waxay ku filan tahay in laga soo saaro kuleylaha laga bilaabo qalabka la qabsoomay oo ku rid miiska, ka saarida ukunta qaybaha;
Haddii dhowr nooc oo shimbiro ah lagu soo bandhigo qalabka, ka dibna 3-4 maalmood ka hor intaan la filaynin, waxaad u guurin kartaa ukunta si qoyan leh, doorka uu marwalba ku haboon yahay;
marka ay tarmayaan xayawaanka ama shimbiraha kale ee aan shimbiraha ahayn, waa suurad wacan in laysku darsado ukumaha gacanta, lana sameeyo 1-2 jeer maalintii;
On R-Com King Suro20, ma jiraan wax khaas ah oo gaar ah ama la xiro, markaa kadib dhammaadka geedi-socodka, waxaad u baahan tahay kaliya inaad tirtirto xarigga awoodda.
Chicks ugu horreeya ayaa laga yaabaa inay soo baxaan dhawr maalmood ka hor intaan la filayn dhammaadka qaboojinta. Waa lagama maarmaan in meel kale oo diirran lagu dhigo oo ay bilaabaan inay xannaaneeyaan, halka kuwo kale ay weli sugayaan in ay ku soo noqdaan gudaha qalabka.
Waxaa laga yaabaa in aad xiiseyneyso inaad akhrisid sida loo si habboon u kobciyo digaagga kiniinka ka dib.
Haddii taariikhaha ay ku haboon yihiin, laakiin aadan ka fiirsan wax firfircooni ah oo aan lahayn ukun hal shidaal ah, waa inaad iftiin kartaa xakameynta adigoo haysta baakidh kasta oo horey u ah laydhka. Tani waxay kaa caawineysaa inaad xaqiijiso in embriyaha ay ku jirto booska saxda ah: qoorta waa in loo soo jiidaa qaybta cidhiidhiga ah ee ukunta.
Xilliga soo dhaweynta, waxqabadka badan waa in lagu eegaa hoostiisa. Qiyaas la isku qiyaasay oo aad u sarreeya waxay muujinaysaa muuqaalka soo noqnoqda ee jiirka, gaar ahaan haddii dusha sare ee qolofta loo yaqaan 'nakleyv'. Dhamaadka geedi-socodka (dhammaan ukumaha waxaa laga saari karaa 1-2 maalmood ka dib taariikhda go'an), waxay weli ku jirtaa oo kaliya in ay nadiifiso kulaylka, ka dibna waxaad sii wadi kartaa marxal cusub. Goobta cusub ma aha mid lagama-maarmaan ah, kaliya ku xir xirka korontada.
R-Com King Suro20 looma yeeri karo weel aad u qaali ah. Dalka Ukraine, qiimaha qalabku wuxuu u dhexeeyaa 10,000 UAH., Inkastoo Ruushku ay lagama maarmaan tahay in la isticmaalo in ka badan 15,000 oo raqiis ah.
Ma aha macno in la raadiyo qandaraaskan ee Europe ama America, sida wadajirka ah ee la wareejiyo waxay ku kici doontaa qadar isku mid ah, laakiin bogagga qaar waxaad arki kartaa qiimaha doolarka (tusaale, waxay weydiinayaan $ 260 suro.com.ua .
Iyadoo lagu saleynayo jawaab celinta dadka, R-Com King Suro20 waa doorasho weyn oo loogu talagalay hindise-bixiye guri oo si buuxda u shaqeynaya hawsha loo xilsaaray, iyada oo loo baahan yahay faragalinta dadka oo yar. Marka la barbardhigo caanaha "Ideal hen", dhammaan hababku waa kuwo si toos ah u shaqeeya, iyo qalabka loo adeegsado ukunta looma baahna.
Sidaa daraadeed, waxaan dhihi karnaa inay tahay doorasho miisaaniyadeed oo wanaagsan oo kala duwan, taas oo lagu talinayo in la isticmaalo beerta yaryar iyo si joogto ah looga soo baxo noocyada kala duwan ee digaaga.
Waxaan haystaa khibrad mid ka mid ah taranta ukunta digaagdoonka ah. Gabagabada waa 93%, kahor intaanay jirin "Hibiska Fiican", wax soo saarku waa mid aad u fiican (quiz). Laakiin in hen ah maalin kasta waxaan ka dhigay ukunta ka soo cidhiidhyo si dhexe iyo dib. R-com King SURO20. Waxaan soo saaray ukumaha, waadna dhihi kartaa waan illoobay. Run, ka dib "hen" ayaan soo galay dhawr jeer maalintii si aan u eego t. Hase yeeshe, wax waliba way fiicnaayeen, ficilkeyga si cad ayaan u baahneyn.Iyadoo aan loo eegin qolka t, kumbuyuutarka laftiisa ayaa si joogto ah u haya t / qoyaanku sidoo kale waxaa lagu hagaajin karaa badhamada waxaana lagu hayaa + -2%. By habka, waxaan dhigayaa ukunta digaagdheer 82 pcs, Ka saaro qaybaha caadiga ah. Waqtiga xiga waxaan isku dayi doonaa 2 saf oo, waxay noqon doontaa 160 sh. Waxaan rabaa in aan jiifo xayawaanka hadda. Saaxiibku wuxuu bixiyaa ukun, gabagabadu waa kala qaybsan tahay. Laakiin wax ku saabsan hannaanka turkey ukunta ukunta ma aha mid aad u xiisa badan. La qaybso qarsoodi ama bixiso xidhiidh ku saabsan hannaanka indoutok.
Tulips - martida beerta oo qurux badan, midab leh
Tamaandhada guud ee Roma
Barashada si ay u koraan radishes: beerto, daryeel, goosashada
Dhakhtarka beerta, ama kaabash ayaa ka baxaya daawada dhaqanka
Digaagga leh xeedho madow: midab, sawir
Fusarium ayaa la rabaa
Waxyaalaha ayaa ku baahsan waddamada Waqooyiga iyo Koonfurta Ameerika, halkaas oo xaaladaha cimiladu ay ku haboon yihiin inay sii kordhaan geedkaan. Dalka Ruushka iyo wadamada deriska ah, dalagga xididgan ayaa ah mid caan ku ah. Wixii dhadhan macaan, baradho macaan ayaa loo yaqaan "baradho macaan". Maqaalkani wuxuu si faahfaahsan u sharaxayaa sida barafka macaanku u eg yahay baradho ku jira guryaha, muuqaalka, dhadhanka iyo xuduudaha kale, iyo sida ay khudaarta u kala duwan yihiin. Read More
Tilmaamaha iyo astaamaha noocyada kala duwan ee noocyada isdhexgalka ee yaanyada "Liana Pink"
Xawaashka diyaarka ah ee dufankaaga - basbaaska-cagaaran: isticmaalka geedka, sawir